Ndị na-ere ọkụ na ndị na-emepụta ihe eji emepụta mmanụ ụgbọ ala dị nfe YiZheng
Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Isi
Crawler Ihe Organic Waste Compost Turner bụ ọkachamara igwe n'ihi na nri fatịlaịza na ndị ọzọ organic ihe gbaa ụka. Ọ na - anabata sistemụ arụmọrụ dị elu, na - arụ ọrụ njikwa na - arụ ọrụ na ntanetị.
Crawler Ordị Organic Waste Composting Turner Machine bụ nke ala ikpo ọkụ, nke bụ ọnọdụ akụ na ụba kachasị echekwa ala na akụ na ụba mmadụ ugbu a. Ihe omuma a kwesiri ichikota ya n'ime ahihia, mgbe ahu ihe nkpali ma gwepia ya site na igwe ntughari, ya na ihe ndi ozo gha adi n'okpuru onodu aerobic. O nwekwara ọrụ gbajiri agbaji, nke na-azọpụta oge na ike ọrụ nke ukwuu, na-eme ka nrụpụta arụmọrụ na ogo ngwaahịa nke osisi fatịlaịza organic dịwanye mma, ọnụ ahịa ya belatara nke ukwuu.
Kedu ihe eji eji Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine eji?
Crawler Ordị Organic Waste Composting Turner Machine bụ ngwa dị ezigbo mkpa na mmepụta fatịlaịza organic. Ọ na - anabata ụdị nnyefe eserese, nke otu onye ga - arụ ọrụ. Enwere ike ịmechaa arụmọrụ ahụ ọ bụghị naanị na mpaghara emeghe, kamakwa na ebe obibi ma ọ bụ ụlọ griinụ. MgbeCrawler Ordị Organic Waste Composting Turner Machine ọrụ, sludge, nnyapade anụmanụ nri na ihe ndị ọzọ nwere ike ọma kpaliri na ero na ahịhịa ntụ ntụ, na-eke aerobic mma gburugburu ebe obibi nke gbaa ụka nke ihe. Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ngwa ngwa karịa ụdị miri emi dị omimi, kamakwa na-egbochi nrụpụta nke gas na-emerụ ahụ dị ka hydrogen sulfide, amine gas na indole n'oge gbaa ụka, nke kwekọrọ na nchedo gburugburu ebe obibi.
Uru nke Crawler Type Composting Turner Machine
Otu n'ime teknụzụ rụzuru nke Crawler Ordị Organic Waste Composting Turner Machine bụ iji kpokọta ọrụ ndinuak ọrụ nke ihe na mgbe e mesịrị ogbo nke gbaa ụka. Na-aga n'ihu na-akpụ akpụ na-atụgharị nke ihe, mma aro nwere ike n'ụzọ dị irè-azọpịa akpụ guzobere na gbaa ụka usoro nke ngwaọrụ. Enweghị ihe ndozi ọzọ achọrọ na mmepụta, nke na-eme ka arụmọrụ arụmọrụ ka mma ma belata ọnụahịa.
(1) Ike bụ 38-55KW vetikal mmiri-mma mmanụ dizel, nke nwere ike zuru oke, arụmọrụ dị elu na obere oriri mmanụ.
(2) Ngwaahịa a tụgharịa na kewapụrụ site adụ mmalite. (Domesticdị ụlọ ndị ọzọ nke otu ụdị ahụ na-eji ígwè maka ijigide ígwè siri ike, nke nwere nnukwu mmebi nke agbụ ahụ, na-ebu ya na osisi ya).
(3) Ọrụ niile na-agbanwe ma dị mfe. Gbanwee oghere dị n'etiti osisi dị mma na ala site na sistemụ hydraulic.
(4) Arụnyere n'ihu haịdrọlik push plat, ya mere na ọ dịghị mkpa iji aka na-dum ikpo.
(5) Nhọrọ ikuku oyi.
(6) A na-ahazi igwe na-eme ka a na-emepụta ihe karịrị 120 horsepower dịka ihe ndị ọrụ chọrọ si dị.
Crawler Ordị Organic Waste Composting Turner Machine Video Display
Crawler Type Composting Turner Machine Model Nhọrọ
54-80 ịnyịnya ike
80-95 ịnyịnya ike
95-115 ịnyịnya ike
Gosiri ike ọsọ
2400 tụgharịa / akara
Ọsọ nke Drikwọ ụgbọala
Ọsọ nke Ọrụ
6-10m / nkeji
Dayameta Vane dayameta
600 ~ 800 square / H
800 ~ 1000 square / H
1000 ~ 1200 square / H
1000 ~ 1500 square / H
Nke gara aga: Chain efere Compost agbanye
Osote: Hydraulic na-ebuli composting Turner